Falanqaynta Nafaqada Shaqaalaha Minnesota
Warshadaynta tamarta tamarta ayaa ah qayb muhiim ka ah dhaqaalaha tamarta nadiifka ah ee Minnesota, oo u dhigma ku dhawaad 45,000 oo shaqo iyo in ka badan 75 boqolkiiba wadarta guud ee tamarta nadiifka ah ee gobolka. Hagaajinta xoogga dhaqaalahaani waxay u baahan tahay wax ka badan nidaam siyaasadeed oo joogto ah. Waxa kale oo ay u baahan tahay si joogto ah, dhuumo tayo sare leh oo shaqaale ah.
Minnesota gudaheeda, caqabadaha sida shaqo-la'aanta guud iyo gaabinta 'tsunami' ee lacagta hawlgabka ah ee ganacsiyada badani waxay halis gelineysaa dhaqaalaha tamarta nadiifka ah ee dhaqaalaha tamarta tamarta nadiifka ah si loo xajiyo ama loo dedejiyo koritaanka. Isla mar ahaantaana, caqabadahaasi waxay soo bandhigaan fursado ay ku abuuraan dariiqooyin xirfadeed oo la heli karo oo loogu talagalay dadka aan faa'iido doonka ahayn kuwaas oo inta badan laga tago barwaaqada dhaqaalaha. Intaa waxaa dheer, farsamooyinka isbeddelka ayaa isbedelaya xirfadaha looga baahan yahay inay ka shaqeeyaan shaqooyinka tamarta nadiifka ah.
Si loo ilaaliyo shaqooyinka tamarta nadiifka ah iyo dhisida kuwa cusub, waxaan u baahannahay inaan si fiican u fahanno muuqaalka shaqooyinka hadda jira ee wax ku oolnimada tamarta iyo sida shaqooyinkan ay u badalayaan si ay ula qabsadaan shaqaaleynta berri berri. Si loo cadeeyo caqabadaha iyo fursadaha, Xarunta Tamarta iyo Deegaanka waxay qiimeyn ku sameysey dhulbeegta hadda shaqeeya ee qaybta tamarta tamarta. Iyadoo loo marayo wareysiyo xiriir ah oo lala yeesho loo-shaqeeyayaasha, barnaamijyada tababarka ganacsiga, iyo xirfadleyda horumarinta shaqaalaha, dadaalkan ayaa tilmaamey isbeddellada iyo fursadaha dhuumaha xoogga shaqaalaha si ay u caawiyaan dawladda si loo hubiyo helitaanka shaqooyinka tayada tamarta ee dhammaan dadka reer Minnesota.